သင်သည်သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည် | Your Appointment With Death | Real Conversion
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, November 11. 2012
“လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)
ယခုအချိန်အခါအတွက် အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှရန်ဖြစ်သည်။ မင်းတို့လို လူငယ်အရွယ်တုန်းက ကျွန်ုပ် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နေရာတကာ၌ ကြားခဲ့ရပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကြားဖို့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ယနေ့တွင် ထိုသို့ မဟုတ်တော့ပါ။ ယနေ့တွင် ကျမ်းစာသင်ကြားရေးကိုသာ အဓိကလုပ်ဆောင်နေကြပါ သည်။ တေးဂီတအတွက် အထူးသင်ကြားခဲ့ကြပြီး ကိုးကွယ်ခြင်းကိုလည်း သင်ကြားခဲ့ကြ ပါသည်။ များစွာသောအသင်းတော်တို့၌ ဖျော်ဖြေရေးကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ကြသည်။ ယနေ့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုမူ တရားပလ္လင်ထက်က ကြားနာဖို့ ခဲယဉ်း လေပြီဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောပြစရာအများရှိနေသော်လည်း ဒီကနေ့နံနက် ၎င်းအကြောင်းအရာကို ဟောပြောမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အဖို့ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဒေသနာတော်သည် လုံလောက်ပြီဖြစ်သည်။ အသစ်တဖန် အသက်တာ ပြောင်းလဲသောသူတို့အနေဖြင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသာ နားထောင်လိုကြပေမည်။ ထိုသတင်းကောင်းကိုသာ မကြာခဏကြားလိုနေပေမည်။ ထိုသို့အတိအကျ အဘယ် ကြောင့် ပြောရသလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကသာလျှင် သေခြင်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ဆုံပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးနေဖို့ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားက အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲက သေခြင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းပတ်သက်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အသိ၊သတိရှိစေမည် ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား နားထောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်နှင့် ပို၍နီးကပ်စေပါသည်။ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသူတို့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နားထောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ “Expository Preaching” ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်း လေ့လာခြင်းပညာ အားဖြင့် ထိုသူတို့၏ အပြစ်နှင့် မဆုံတွေ့စေသဖြင့်၊ ထိုသူတို့ ခရစ်တော်ဘုရားကို လိုလားကြမည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ရှုပ်ထွေးနေသော ခေတ်ကာလ အဖို့၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ခေါင်းပါးခြင်းဖြင့် စီရင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပရောဖက် အာမုတ်က ဘုရားသခင် မိန့်ကြားသကဲ့သို့ တစ်ထစ်ချကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ “အစာ ခေါင်းပါး မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးမဟုတ်၊ ရေငတ်ခြင်းဘေးလည်းမဟုတ်၊ ထာ၀ရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို မကြားရသောဘေးဖြစ်လိမ့်မည်။” (အာမုတ် ၈း၁၁)။ ၎င်းကျမ်း၌ နှုတ်က ပတ်အမိန့်တော်ဘေးဟူ၍ မဆိုပါ၊ “နှုတ်ကပတ်အမိန့်တော်က မကြားရသောဘေး” ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ မက်သရူးဟင်နရီ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ထိုသူတို့၌ ရေးသားထား သော သမ္မာကျမ်းများရှိသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကူးရေးခြင်းဖြင့် ထိုသူတို့၏ အသက်တာ ကို မတွေ့ထိနိုင်ပါ။” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကြားနား ခြင်းအားဖြင့် ထိုသူတို့၏ စိတ်နှလုံးသားကို ထိတွေ့ပြီး အသက်တာပြောင်းလဲစေ ပါသည်။ ကျမ်းစာသင်ကြားရုံဖြင့်လည်း ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကြားနာရမှသာလျှင် အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းက ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသူတို့၏ အာရုံကိုဖမ်းစားပြီး ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကို ကြားနာ စေလိုပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ရှားပါးသောဘေး ယနေ့ ကြုံတွေ့နေ ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာအားဖြင့် ယနေ့ကမ္ဘာလောကကို ဘုရားသခင် တရား စီရင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တရားဒေသနာတော်သည် ရိုးရှင်းလှသဖြင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည်လည်း ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤတရားဒေသနာတော်ကို ဒေါက်တာဒဗလျူဟာရှလ်ဖေါတ်၏ "Simple Sermons on the Old-Time Religion" မှ ကောက်နှုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ (Zondervan, 1972 edition, pp. 105-112) သေခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်သော ဒေသနာတော်သည်လည်း ရိုးရှင်းလှပါသည်။ ဤတရားဒေသနာတော် နားထောင်းသူ အားလုံးတို့လည်း သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံကြရပါမည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့် တော်မူသည်ကား
“လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)။
လွန်ခဲ့သောသောကြာနေ့က ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ၌ ကျွန်ုပ်၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဆုံးပါး၍ အသုဘကိစ္စဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးသောနေ့၌ သူမသည် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ သူမ၏ခေါင်းနားသို့ ကပ်ကြည့်သောအခါ သူမအား ခြယ်သလိမ်းကျံထားသဖြင့် သက်ရှိနှင့်တူနေပါသည်။ သူမအား ပိုးထည်ပိတ်စနှင့်ပတ်ရစ်လျက် ခေါင်းတလား၌ ထားကြသည်။ ရောင်စုံပန်းများနှင့် အလှဆင်ပေးကြပါသည်။ ခြယ်သလိမ်းခြယ် အလှဆင်ပြီးသော်လည်း လူသေအလောင်းမူကား လှပ၍မလာပါ။ ကြောက်ရွံရွံရှာစရာပင် ဖြစ်လေတော့၏။ သေခြင်းက ထိုသို့မဟုတ်ပါဟု သင်အညာမခံမိပါစေနှင့်။ သေခြင်းက လူတို့၏ရန်သူပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ခေါ်ဆိုသည်ကား “နောက်ဆုံး ရန်သူသည် သေမင်းဖြစ်၏” (၁ကော ၁၅း၂၆) သင်၏ရန်သူသေခြင်းနှင့် သင်တွေ့ကြုံ ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းက “လူသည် တစ်ခါတည်းသာသေ၍ ထို့နောက်မှ တရားစီရင် တော်မူခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇) ၌ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သင်သည် သေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် သေခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မည်ကဲ့သို့ မိန့်တော်မူ ထားသည်ကို သိနားလည်းဖို့လိုပါသည်။
၁။	ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား သေခြင်း၏မူလအစကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။
ဧဒင်ဥယျာဉ်သည် သာယာလှပပြီး လူသားတို့ အခြေချနေထိုင်ရန် နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သေခြင်းနှင့်အပြစ် ဘယ်တော့အခါမှ ဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိပေ။ ထို့နောက် ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား ၊
“ထာ၀ရအရှင် ဘုရားသခင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကို သိကျွမ်းရာ အပင်မှတပါး ထိုဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသော အပင်တို့၏အသီးကို သင်သည် စားရသောအခွင့်ရှိ၏။ ထိုအပင်၏ အသီးကိုကား မစားရ။စားသောနေ့ တွင် ဧကန်အမှန် သေရမည်ဟု လူကိုပညတ်ထားတော်မူ၏” (ကမ္ဘာ ၂း၁၆-၁၇)။
သို့သော်လည်း အာဒံနှင့်ဧ၀တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို နာမခံဘဲ တားမြစ်ထားသော အသီးကို စားရသောခဏတွင် ဝိညာဉ်သည် သေကြေခဲ့ရပါသည်။ တဆက်တည်း ခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းလည်း လိုက်လာခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံမှနောဧအထိ လူသားမျိုးဆက် ကိုးဆက်အထိကို ဘုရားသခင် စာရင်းပြုနေခဲ့သည်။ ဧနောက်သည် အရှင်လတ်လတ် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်ထဲသို့ ဝင်စားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မာ ကျမ်းစာ၌မည်သို့ မိန့်တော်မူသနည်း။၊ “သူသေလေ၏” “သူသေလေ၏” “သူသေ လေ၏” “သူသေလေ၏” “သူသေလေ၏” “သူသေလေ၏” ထာ၀ရဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူသည်မှာ ၊ “ဧကန်အမှန်သေရမည်” ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဣသရေဘုရင်နှင့် ယုဒဘုရင်တို့၏ သမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်သောအခါ “သူတို့အသက်ရှင် ခဲ့သည်၊ သူတို့အုပ်စိုးခဲ့သည်။ သူတို့သေလေ၏” ဟူ၍ တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထာ၀ရ ဘုရားက မောရှေအား “ထာ၀ရဘုရားကလည်း သင်သည် သေရသောအချိန်နီးပြီ”ဟူ၍ မောရှေကို မိန့်တော်မူပါသည်။ (တရား ၃၁း၁၄) ထာ၀ရဘုရားကလည်း ဘုရင်ဟေဇကိ အား သင်သေရမည်ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ (ဟေရှာယ ၃၁း၁)။
ယေရှုက သေခြင်းအကြောင်းကို မကြာခဏ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ (လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁)ကိုကြည့်သောအခါ သူဌေးကြီးသေဆုံးပြီး ငရဲသို့ကျရောက်သည်ကို တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။(လုကာ ၁၂း၁၃-၂၁)ကို ဖတ်သောအခါ ဝိညာဉ်ဆင်းရဲသောသူဌေးအား ယနေ့ညဉ့်ပင် သင်၏ဝိညာဉ်ကို ရုပ်သိမ်းရာအချိန် ရောက်လိမ့်မည်ဟူ၍ ယေရှုက မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုက (ရှင်ယောဟန် ၈း၂၄)၌လည်း ဖာရိရှဲတို့အား ကိုယ် အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ သေခြင်းသည် အပြစ်ကြောင့်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ပထမလူအာဒံသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့် သူ၏သားစဉ်မြေးဆက် သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရပါသည်။ မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သေခြင်းမျိုးစေ့ ရှိနေပါသည်။ သွားတို့သည်လည်း ကျိုးကုန်လေပြီ။ ဆံပင်သည်လည်း ကျွတ်ကျလာပြီ။ ဆံပင်လည်း မိးခိုးရောင်သန်းနေလေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ မျက်စိလည်းမှုန်လာပြီး အရိုးအကြော တို့လည်း ချိနဲ့လာပြီ။ နှလုံးလည်းအားနည်းလာပြီး သွေးပေါင်လည်း တက်လာလေပြီး။ ငယ်ရွယ်သောသူတို့လည်း ကင်ဆာရောဂါကြောင့်လည်းကောင်း၊ သွေးဖြူဥပိုများနေ သောကြောင့်လည်းကောင်း အခြားသောရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းကြောင့် သေကြရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သင်ဘယ်လိုမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်နေပါစေ သင့်ကို သေခြင်းက စောင့်ဆိုင်း နေပါသည်။ “လူသည် တစ်ခါတည်းသာသေ၍ ထို့နောက်မှာ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်။” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)
ပန်းအရောင်းသမားများရှိနေရခြင်းသည် လူသေအလောင်းအား လိမ်းကျံခြယ်သ ပန်းအလှဆင်ရာမှ ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေကြရမည်ဟူသော ဝါဒဖြင့် အသက်အာမခံတစ်ဦးက မိမိတို့၏ဝါဒကို ဖြန့်ချီပါသည်။ ကားလမ်းယဉ်ကြော ပိတ်မိ၍ လည်း သေနိုင်ပါသည်။ ထောင်ချီသောသူတို့သည် နေ့စဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှုဖြင့် သေကြေရကြပါသည်။ ထောင်ချီသောသူအချို့တို့လည်း မိမိကိုယ်ကို မိမိသတ်သေ ခဲ့ကြသည်။ “လူသေအလောင်းခေါင်းထမ်းထုတ်ဖို့ တံခါးပေါက်ကျယ်ကျယ်ထားရမည်။” ဟူသော စည်းမျဉ်းကို ဗိသုကာ ပညာရှင်များ သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
“ဤအရာများက အကျွန်ုပ်အား မကြောက်လန့်စေပါ။” ဟူ၍ သင်ပြောကောင်း ပြောနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း မကြောက်လန့်စေခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ အကျွန်ုပ်သည် သေခြင်းမှအောင်မြင်တော်မူသော ခရစ်တော်၌ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူမဟုတ်ပါက သေခြင်းအား ကြောက်လန့်သင့်ပါသည်။ဍ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းအခွင့်အလမ်းမှ အားလုံးသေခြင်းက လက်ဦးသွားနိုင်ပါသည်။ သင်၌သေခြင်း လျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာမည်ကို အမှတ်ရ နေလိုက်ပါ။ အခုပင်သင့်အဖို့ ပိုးထည်ပိတ်စလည်း ခေါင်းတလားခြုံဖို့ စောင့်နေကာ စောင့်နေနိုင်ပါသည်။ လူငယ်တစ်စုံတစ်ဦးက အကျွန်ုပ်၏ဒေသနာတော်ကို သရော်ပြောင် လှောင်နေမည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်သိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တရားဟောစဉ်တုန်းက ဘုရား ကျောင်း၏ နောက်ဆုံးခုံ၌ ထိုင်၍ ရွှင်မြူးစေသောစာအုပ်ကို ကျမ်းစာအုပ်အကာယူပြီး ဖတ်နေသောလူငယ် မကြာမှီတစ်ရက်နှစ်ရက်အကြာသေပြီး ခေါင်းတလားထဲ ထည့်ထား သည်ကို မြင်ခဲ့ရပါသည်။ “လူသည် တစ်ခါတည်းသာသေ၍ ထို့နောက်မှာ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်။” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)။ ဓမ္မသီချင်း၌ သီကုံးရေးသား ခဲ့သည်မှာ ၊
(၁၈၄၇-၁၉၀၉ ဝီအယ်လ်တွမ်ဆန် သီကုံးသော “သိမ်မွေ့စွာဖိတ်ခေါ်” )
၂။	ဒုတိယ၊ သေပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကယ်တင်ခြင်းခံပြီးသောသူတို့ သေဆုံးခါနီး၌ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း၊ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက “ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကွာဝေးရာအရပ်သို့သွားပြီး ဘုရားသခင်ထံ၌ နေမြဲနေခြင်း ငှါ” (၂ကော ၅း၈)ဟူ၍ မိန့်ကြားထားပါသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူသေဆုံးသောအခါ၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် သချုØင်းသို့အပ်နှံကာ၊ ဝိညာဉ်သည်ကား ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ဘုန်း တော်ဝင်စားမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားက ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံရသော ဓါးပြအား “ယနေ့ပင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည်။” (လုကာ ၂၃း၄၃)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသောသူတို့သည် သေခြင်းကို မကြောက် လန့်ပါ။ လွန်ခဲ့သောသောကြာနေ့က ကင်ဆာနှင့်သေသွားသောအမျိုးသမီးက မိမိသည် ကင်ဆာရောဂါနှင့်သေရမည်ကို သိနှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မကြာသေးသောအပါတ် ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့် အလည်အပတ်သွားခဲ့စဉ်က သူမသည် ပြုံးလျက်နှင့် စကားပြောခဲ့ ပါသည်။ သူမသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် သူမ၌ ငြိမ်သက်ခြင်း အပြည့်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သောသောကြာနေ့ ညနေခင်း၌ သူမ၏ အောက်မေ့ဖွယ်ရာ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ရာချီသောလူအုပ်ကြား သူမ၏ကိုယ်ရေး အကျဉ်းကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသောသူတို့ သေဆုံးခါနီး၌ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း၊ ရှင်လုကာ အခန်းကြီးတစ်ဆယ့်ခြောက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ “သူဌေး သည်လည်းသေလွန်၍ သင်္ဂြိုလ်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ မရဏာနိုင်ငံ၌ ပြင်းစွာသော ဝေဒနာ ကိုခံရလျက် မျှော်ကြည့်၍” (လုကာ ၁၆း၂၂-၂၃)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ အသစ်သော အသက်တာ၌ မပြောင်းလဲသောသူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်သောကြောင့် ငရဲ၌ ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံရကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် မြေကြီးထဲသို့ သင်္ဂြိုလ်ကြရပါမည်။ သို့သော် ထိုသူတို့၏ဝိညာ်ဉ်သည် ငရဲမီးအိုင်ထဲ ကျရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ထိုသူတို့သည် ထာ၀ရအပြစ်ဒဏ်ကို ခံရာသို့၎င်း” (မဿဲ ၂၅း၄၆) ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့မူကား “ကန့်နှင့်လောင်သောမီးအိုင်၌ မိမိတို့ အဖို့ကို ရကြပါလိမ့်မည်” (ဗျာဒိတ် ၂၁း၈)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ “ထိုညှင်းဆဲခြင်း၏ မီးခိုးသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် တက်လျက်ရှိ၏၊ သူတို့သည် နေ့ညမပြတ် သက်သာရာ မရကြ”(ဗျာဒိတ် ၁၄း၁၁)ဟူ၍ မိန့်တော်မူ ပါသည်။ သေပြီးနောက် ရွေးချယ်ရာ အခွင့်အရေး ရှိဦးမည်လား၊ သမ္မာကျမ်းစာတော် မြတ်က တိတိကျကျ(မရှိဘူး)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ အာဗြဟံက မီးငရဲ၌ ရောက်ရှိသောသူဌေးအား
“ထိုမှတပါး ငါတို့နှင့်သင်တို့စပ်ကြား၌ အလွန်နက်လှသော ချောက်ကြီး တည်လျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဤအရပ်မှ ငါတို့ရှိရာသို့ ကူးချင်သောသူ မကူးနိုင်။ ထိုအရပ်မှ ငါတို့ရှိရာသို့ ကူးချင်သောသူလည်း မကူးနိုင်ဟုဆို၏” (လုကာ ၁၆း၂၆)
ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသောလူသည် အစဉ်ထာ၀ရမီးငရဲနှင့် ကောင်းကင်ခြား ကူး၍ မရသဖြင့် ငရဲ၌သာ အစဉ်အပြစ်ဒဏ်ခံရပါမည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက သင့်အား သခင့်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်အရ သေပြီးနောက် ရွေးချယ်စရာ မည်သည့်အခွင့်အရေးမှ မရှိတော့ပါ။
၃။	တတိယ၊ သင်သည် ရုတ်တရက်သေနိုင်သည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ သတိပေးထားပါသည်။
သေဆုံးသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်သည် ရုတ်တရက်သေဆုံးသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ကားမတော်တဆတိုက်မှု၊ လူသတ်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ အဆုံးစီရင်မှု၊ စစ်ပွဲ၊ နှလုံးရောဂါ သည်စသည့် သေဆုံးခြင်းတို့သည် မတော်တဆ သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ မတော်တဆ သေဆုံးရာ၌ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မိမိအပြစ်အဖို့ နောင်တရရန် ပင်အချိန်မရှိနိုင်ပါ။ ထိုသူတို့သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား
“အထပ်ထပ် ဆုံးမခြင်းကို ခံသော်လည်း မိမိလည်ပင်းကို ခိုင်မာစေသောသူ ကိုးကွယ်ရာ မရ၊ ရုတ်တရက် ပျက်ဆီးလိမ့်မည်” (သုတ္တံ ၂၉း၁)
ကျွန်ုပ်ဒေသနာတော်ကို ဟောကြားသည်မှာ (၅၅)နှစ်ပြည့်လို့လာပါပြီး။ တစ်နှစ် ပြီးတစ်နှစ် ဖြတ်သန်းလာသည်နှင့်အမျှ လူအများတို့သည် ရုတ်တရက် အပြင်အဆင် မရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ကြုံခဲ့ကြသည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ဖြတ်သန်းလာသည်နှင့် အမျှ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသေးသောသူတို့၏ အသုဘဝတ်ပြုအစီအစဉ် သွားရောက်ခဲ့ ဖူးပါသည်။ ထိုဝတ်ပြုအစည်းအဝေး တက်ရောက်ပြီး တရားဒေသနာဝေငှဖို့ အမြဲ အခက် ကြုံရပါသည်။ အကြောင်းမူကား ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူတို့အား မျှော်လင့်ရာနှင့်နှစ်သိမ့်ရာ အခွင့်မရှိဘဲ ဖြစ်နေပါသည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတို့အဖို့သာ တရားဒေသနာ ဝေငှ လိုက်ရသည်။ တစ်နေ့ သင်သည် အသက်တာအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ရုတ်တရက် သေဆုံးမည်ဆိုလျှင် မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း ၊ တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောကြားသကဲ့သို့
“ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာ ခရစ်တော်ဖြစ်၏ သေလျှင်မူကား သာ၍အကျိုးရှိ၏” ( ဖိလပ္ပိ ၁း၂၁)ဟူ၍ ပြောနိုင်ပါမည်လား၊ ခရစ်တော်နှင့်အကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိ၊ ထာ၀ရ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ သင်သွားရောက်နိုင်ပါမည်လား၊ သင့်အတွက် ကောင်းကင်ဘုံလား၊ သို့မဟုတ် ငရဲကိုသွားမှာလား၊ ၎င်းမေးခွန်းက သိမ့်အရေးကြီးသော မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်အား အမေးခံရမည့် မေးခွန်းလည်းဖြစ်သည်။ “လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)၌ မိန့်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်ကျွေးအားလုံးကို ကိုယ်စားပေးဆပ်ဖို့
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ သင့်အပြစ်ကို အသွေးတော်ဖြင့် ဆေး ကြောပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အား ထာ၀ရအသက်ကိုပေးလိုသောငှါ ကိုယ်တော်သည် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ အပြစ်သဘောကို နားလည်ရမှာဖြစ်ပြီး သင်သည် အပြစ်မှလွတ်မြောက်ဖို့ ခရစ်တော်ကို လိုအပ်ကြောင်း သိရပါမည်။ အပြစ်ဇာတိသဘောမှ အသက်ရှင်ရာဆီသို့ သင်သည် ဦးလှည့်ဖို့လိုပါသည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးသောအခါ သင်သည် ခရစ်တော်နှင့် တွေ့ဆုံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သင်၌ အမှန်တွေ့ကြုံရပါက သင်သည် အမှန်တကယ် အသက်တာပြောင်းလဲပြီဖြစ်ပါသဖြင့် သင်၌မျှော်လင့်စရာရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင် ထိုသို့မပြောင်းလဲသေးပါက သင်၌ ဘာဆိုဘာမှ မျှော်လင့်စရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်အား အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေ နံနက်ဝတ်ပြုစည်းဝေး၌သော်လည်းကောင်း၊ တနင်္ဂနွေ ညဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ သင်တက်ရောက်ပြီး သတင်းကောင်း နားထောင်စေလိုပါသည်။ သင်ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့လည်းကောင်း၊ အသင်းတော်၌ ခရစ်တော်နှင့် မိတ်သဟာရရှိလာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော် မူသည်ကား၊
“ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၏” (၁တိ ၁း၁၅)
မျှော်လင့်စရာမရှိသောသေခြင်းမှာ ယေရှုသခင်အား ကယ်တင်တော်မူပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ သင်အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ (အာမင်)
သင်ကယ်တင်ခြင်း မရသေးသောသူဖြစ်ပါက ရှေ့သို့ထွက်လာပြီး မတ်တပ်ရပ် နေလိုက်ပါ၊ ဒေါက်တာကေကန်မှ ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွား ပါမည်။ သင်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးပါမည်။ သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပေးပြီး ကျမ်းစာတော်ကိုလည်း ဖတ်ကြားပေးပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်တို့သည် သီချင်းနံပါ (၇)ကို ဖွင့်ထားကြပါ။ ၎င်းသီချင်းဆိုနေစဉ် မိတ်ဆွေတို့ ထိုင်ရာမှ ရှေ့သို့ ကြွလှမ်းလာခဲ့ပါ။
-	သိမ်မွေ့နူးညံ့လေသံဖြင့် သခင်ခေါ်နေ
-	အဘယ်ကြောင့်နှေးရ၊ ကိုယ်တော်ဖိတ်ခေါ်
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား သည်းခံမည်လား ၊
-	အချိန်သည် လျှင်မြန်စွာကုန်လွင်တော့မည်
ဒေါက်တာကေကန်ခင်ဗျား၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤရှေ့သို့ ကြွလှမ်းလာကြသော သူတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ။ (ဆုတောင်းသည်)
တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ မစ္စတာဂျူဒေါင်လီမှ ဟေဗြဲ ၉း၂၄-၂၈ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-	တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၈၄၇- ၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ ဝီအယ်လ်တွမ်ဆန် သီကုံးရေးသားသော “သိမ်မွေ့စွာဖိတ်ခေါ်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
သင်သည် သေခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပြီ ဖြစ်သည်။
(အာမုတ် ၈း၁၁ç ၁ကော ၁၅း၂၆)
၁။ ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား သေခြင်း၏မူလအစကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ကမ္ဘာ ၂း၁၆-၁၇၊ တရားဟော ၃၁း၁၄၊ ဟေရှာယ ၃၁း၈၊ လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁လုကာ ၁၂း၁၃-၂၁၊ ယောဟန် ၈း၂၄။
၂။ ဒုတိယ၊ သေလွန်ပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ကျွန်ုfပ်တို့အား ဖော်ပြထားပါသည်။ ၂ကော ၅း၈၊ လုကာ ၂၃း၄၃၊ လုကာ ၁၆း၂၂-၂၃၊ ရှင်မဿဲ ၂၅း၄၆၊ ဗျာဒိတ် ၂၁း၈ ဗျာဒိတ် ၁၄း၁၁၊ လုကာ ၁၆း၂၆။
၃။ တတိယ၊ သင်သည် ရုတ်တရက်သေနိုင်သည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ သတိပေးထားပါသည်။ သုတ္တံ ၂၉း၁၊ ဖိလိပ္ပိ ၁း၂၁၊ ၁တိမောသေ ၁း၁၅။